March 15, 2020 - Myitter
ကူးစကျတတျသော ရောဂါမြား ကွိုတငျကာကှယျဖို့ ဒနျ့သလှနျကို စားကွ စို့
ဒနျ့ သလှနျတဈပငျလုံး ဆေးအသုံး ကူးစကျတတျသောရောဂါမြား ကွိုတငျကာကှယျဖို့ ဒနျ့သလှနျ ကိုစားကွစို့ အရှကျ အရှကျကို ဟငျးခြိုခကျြသောကျလငျြ သှေးကသြညျ။ အမူးအမျော ပွစေသေညျ။ အရှကျကို ကွကျသှနျဖွူ ငရုတျကောငျးနှငျ့ဟငျးခြို ခကျြသောကျပါက ရာသီထိနျတတျသောအမြိုးသမီးမြား ဓမ်မတာမှနျစသေညျ။ အပူလှနျကဲသော ရောဂါမြားကိုနိုငျသညျ။ ကြောပူရငျပူ လညျခြောငျးပူ နှုတျခမျးပူစသော အပူလှနျကဲခွငျးကို […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ကြိုးကြာတောင်ပံများ မခတ်နိုင်တော့သည့် မြန်မာဆရာဝန်တွေရဲ့ ဘဝ…….
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ကြိုးကြာတောင်ပံများ မခတ်နိုင်တော့သည့် မြန်မာဆရာဝန်တွေရဲ့ ဘဝ… ကြိုးကြာ တောင်ပံများ မခတ်နိုင်တော့မည်ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။ ဒီပို့စ်က အစိုးရဆရာဝန် နဲ့သူနာပြုများရယ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်… ကျွန်တော် ဆရာဝန် တစ်ယောက်ပါ.. အစိုးရဆရာဝန် တစ်ယောက်ပါ.. မြန်မာပြည်က အစိုးရဆရာဝန် တစ်ယောက်ရဲ့ လစာက အခြေခံ […]
ပြည်ပ စပွန်ဆာတွေ အားကိုးနဲ့ တို့ဗုဒ္ဓကို မာ့ခ်တပ်ပေးခဲ့ကြတာ အခုတော့ တကမ္ဘာလုံး မာ့ခ်တွေ တပ်နေကြရရော….
ပြည်ပ စပွန်ဆာတွေ အားကိုးနဲ့ တို့ဗုဒ္ဓကို မာ့ခ်တပ်ပေးခဲ့ကြတာ အခုတော့ တကမ္ဘာလုံး မာ့ခ်တွေ တပ်နေကြရရော…. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိတ်နှလုံး ညှိုးနွမ်းအောင် အမျိုးမျိုး အနိုင်ကျင့် ပြုမူနေကြတာ …. အခုတော့ တန်ပြန်ဝိပါကတွေ ရောက်လာပြီး စိတ်ညစ်နေကြရပြီ မဟုတ်လား…..။ ကံ၊ ကံ၏အကျိုး….! မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာ […]
ဆီဆိုင်မြို့နယ် ထီဟန်းထး ကျေးရွာတွင် ရေရှားပါးမှုကြုံနေ
ဆီဆိုင်မြို့နယ် ထီဟန်းထုံးကျေးရွာတွင် ရေရှားပါးမှုကြုံနေ ဆီဆိုင်မြို့နယ် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု ထီဟန်းထုံးရွာတွင် ရေရှားပါးမှုကြုံနေရကြောင်း မတ်လ ၁၅ရက်တွင် ဒေသခံများပြောပြချက်အရသိရသည်။ ရေရှားပါးမှုပြဿနာကို ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းတွင် နှစ်စဉ်ကြုံ တွေ့လာနေရပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရေပိုရှားလာတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြသည်။ “ရေကနွေရာသီရောက်ပြီဆို ခန်းကုန်ပြီ၊ ရေရဖို့တစ်နေကုန် သွားစောင့်ရတယ်၊ သောက်ရေတွေကလည်း မသန့်ရှင်းဘူး၊ ရေနှောက်တယ်၊ တစ်နေ့ဆို […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဆေးရုံပစ္စည်း ငွေကျပ် သိန်း ၁၁၀၀ ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းသွားမယ့် သီရိသုဓမ္မသူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းတို့မိသားစု ….
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ COVID-19 ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ယခုချိန်ထိ တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ မတွေ့ရှိရသေးသော်လည်း ပြည်ပ နိုင်ငံများတွင် ပျံ့နှံ့မှုများ ရှိနေပါသဖြင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ( Pandemic )အနေဖြင့် ( ၁၁-၃-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ EFF FOUNDATION( EXCELLENT FORTUNE […]
ဆရာဝန်သုံး ကာကွယ်ရေး ၀တ်စုံ ၃၀၀၀ တိတိ လှူဒါန်းလို၍ လိုအပ်နေသည့် ​ဆေးရုံများ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် …..
ရောဂါကာကွယ်ရေး ၀တ်စုံ ၃၀၀၀ တိတိ လှူဒါန်းလို၍ လိုအပ်သည့် ​ဆေးရုံများဆက်သွယ်ဖို့ ပြောလာတဲ့ သီရိသုဓမ္မ သူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း မိသားစု ဆရာဝန်သုံး ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ PPE အစုံ 3000 တိတိလှူဒါန်းပါမယ် လိုအပ်တဲ့ဆေးရုံများဆက်သွယ်ဖို့ ပြောလာတဲ့ သီရိသုဓမ္မ သူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း မိသားစု။ ( […]
မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံ (၇) ခုမှ လာသူများ ဆေးရုံမှာ (၂)ပတ် စောင့်ကြည့်ပြီးမှ သွားလိုရာ သွားခွင့်ပြုမည် …..
မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံ (၇) ခုမှ လာသူများ ဆေးရုံမှာ (၂)ပတ် စောင့်ကြည့်ပြီးမှ သွားလိုရာ သွားခွင့်ပြုမည်… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မြင့်တက်နေတဲ့ နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံကလာတဲ့ မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို (၁၄) ရက်ကြာ ပြည်တွင်းမှာ သီးသန့်ခွဲခြားစောင့်ကြည့်ပြီးမှ ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုမယ့်အစီအစဉ်ကို ဒီကနေ့ မတ်လ […]
မောက်မယ်မြို့နယ် ဟံးဗွာရွာတွင် တရွာလုံး ဖျားနာ ….
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ကဒူးကြီးကျေးရွာအုပ်စု ဗန်းမင်ဒေသ ဟံးဗွာရွာမှာ ပြည်သူတွေ တရွာလုံးနီးပါး ဖျားနာမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ရွာသားတွေက ဟိုပုံးမြို့နယ် ထမ်းဆန်းရွှေတိဂုံဘုရား အိုးစည် ၁၀၀၀ ပွဲတော်က ပြန်လာပြီး စတင်ဖျားနာကြကာ တရွာလုံး ကူးစက်ခဲ့တာလို့ ပအိုဝ်းဒေသ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ (PHWC) ဒါရိုက်တာ ခွန်စည်သူက […]
မနျးရှစေကျတျောဘုရားပှဲ ပိတျသိမျးလို့ နဈနာမှုတှရှေိတယျဆိုတဲ့ ဆိုငျခနျးရှငျ တဈခြို့ရဲ့ ရငျဖှငျ့သံမြား
မတျ(၁၅) ဝဖေုနျးစံ(ပွညျ) #AlinnMyay(အလငျးမွေ)#ပွညျသူ့ကူညီရေး #ပွညျသူ့အသံဖျောဆောငျရေး #သတငျးမှနျမီဒီယာ ကမ်တာတဈဝှမျးမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ ကိုရိုနာအဆုတျရောငျရောဂါကွောငျ့ မတျလ ၁၃ ရကျနကေ့ မနျးရှစေကျတျော ဘုရားပှဲကို ပိတျသိမျးလိုကျပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး ဘုရားဖူးတှကေို ဝငျရောကျခှငျ့ မပွုတော့သလို စြေးဆိုငျခနျးတှေ၊ တညျးခိုဆောငျတှကေိုလညျး မတျလ ၂၀ နောကျဆုံးထားပွီး ထှကျခှာဖို့ ဂေါပက […]